IMexico City inokuba neVenkile yesibini yeApple | Ndisuka mac
IMexico City inokuba neVenkile yesibini yeApple
NgoSeptemba ophelileyo siphawule ngoSoy de Mac, the ukuvulwa kwe Ivenkile yokuqala yeApple kwisiXeko saseMexico. Kuyabonakala ukuba, iApple iyonwabile ngohlobo olufanayo kwaye icwangcisa ukuvula ivenkile entsha kwisithuba sonyaka omnye ukuya kwemibini. Inkampani ayikaze igwebe kwiikhrayitheriya kunye nenkqubo yokuvula iivenkile ngexesha elithile okanye kwindawo ethile. Nangona kunjalo, iimfuno zenkampani ngokwendawo leyo, kunye nexabiso elinokufuna xa umnini eyazi ukuba iApple isemva kotyalo mali, kufuneka isenze nzima isivumelwano.
Ukongeza, le venkile yenzelwe iimpawu ezithile: kufuneka ibe ngumgangatho wendalo. Uyilo olukhethiweyo luyafana neVenkile yeApple kwiZiko loRhwebo leHlabathi eNew York, ivulwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ngakumbi ku-Agasti ophelileyo. Inkampani yayiya kufikelela kwisivumelwano nendawo enkulu kwi Indawo yokuthenga yeAntara yeHolo. Le venkile inokuphinda kabini indawo yevenkile yokuqala yeApple esixekweni, kwaye ikwindawo ekumelwe kuyo Ukuhamba ngeZiko laseSanta Fe, engqongwe ziimpawu ezaziwayo. Iziko lokuthenga lavula iingcango zalo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo kwaye laziwa esixekweni njengomgangatho wokugqibela kunye nokunethezeka.
Kuyabonakala ukuba ivenkile iya kuba nezinto ezinomdla: Ezinye ziya kudibana nolwakhiwo olunje iisilingi eziphezulu kakhulu. Abanye endaweni yoko banetekhnoloji: kujongeka ngathi izakubonisa umabonwakude ngaphezulu kwee-intshi ezingama-400. Ngokunokwenzeka ukuhanjiswa kwayo kunemigangatho emibini, yahlulahlula indawo yentengiso kwindawo ebekelwe uGenius, uqeqesho kunye nokulungiswa kwezixhobo. Olu nikezelo lukhethwa yiApple kwaye luyisebenzisa ezivenkileni nanini na apho lunakho.
kunjalo, umhla wokuvula awaziwa. Ngokuqinisekileyo ayizukulibazisa, njengoko ivenkile yokuqala igcwele izinto ezilungileyo ze-Apple kwindawo yokuhlala, inkonzo kunye nentengiso. Amarhe okuba inyathelo elilandelayo lika-Apple inokuba kukuthunyelwa ngakumbi eBrazil.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IMexico City inokuba neVenkile yesibini yeApple
I-Apple ikhupha i-MacOS 10.12.5 beta yabaphuhlisi
Uhlaziyo olutsha lweTelegram yeMac, inguqulelo 2.93